Shan sheey oo ugub ah oo Trump ku saabsan oo banaanka yimid - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka AFP/PA Media
Image caption Donald Trump iyo Sir Kim Darroch
"Xushmaddii loo hayay Maraykanka waa ay soo noqotay" ayaa ah hadalka ugu badan ee uu yiraahdo Donald Trump. Markii uu ku jiray tartankii doorashada 2016-kii, waxa uu sheegay in intii uu xilka hayay madaxweyne Barack Obama in uu hoos u dhacay maqaamkii Maraykanka ee adduunka, balse markii uu isaga xilka yimid taas ay wax badan iska badaleen.
Britain oo wado qorshe Trump looga qancinayo heshiiska Iiraan
Trump: Safiirka Ingiriiska waa doqon gaamurey
Dhibka hadda jira waxa uu yahay in mid ka mid safiiradda ugu sumcadda badan, uguna saamaynta badan ee Maraykanka fadhiyay , Kim Darroch uu Trump ku tilmaamay nin aan shaqada aan u qalmin, islamarkaasna Aqalka Cad ku tilmaamay meel qas iyo jiho wareer ka jiro. Hadalka danjiraha dalka saaxiibka ugu dhow ay yihiin Maraykanka ayaa ka dhigan in uu dhahayo 'waakaas boqorkii, oo ay marada ka dhacday'.
Image caption Sir Kim Darroch
Image caption Boris Johnson iyo Sir Kim Darroch
Trump dadka toos uma eryo, balse waxa uu tusaa wax ay ku tagaan, tusaale haddii uu Trump doonayo in uu Kim tago, waxa uu awood u lahaa in uu saxiixo xeerka 'Persona Non Grata' oo ku xusan qodobka 9-aad ee Vienna ee dublamaasiyadda, taas oo UK ku qasbi lahayd in ay safiirka badesho.
Lahaanshaha sawirka NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images
Arrintan waxa ay ku caddeyd shir jaraa'id oo ay qabatay afhayeenka Aqalka Cad Morgan Ortagus ayaa ku adkaysatay in xiriirka ka dhaxeeya Maraykanka iyo Britain uu yahay mid ka weyn shaqsi iyo waliba dowlad markaas xilka haysa.